Waano Guur oo ka socota Walaalkiis Dhale
1. Xaaskaaga Jacaylka aad u Qabto ha Tusin:
Dadka ku taqasusa cilmu nafsiga caruurta waxay leeyihiin, hadiyadda ugu weyn uu Waalidka siiyo caruurtiisa waa markay arkaan in aad hooyadooda jeceshahay, sidoo kalena waa la mid markay xaaska tusto in ay jeceshahay aabahooda. Markaad fiiriso, imisaa ku dhaqantay, xadiiska kore ee ah in aad gacantaada cuno ku soo qaado oo aad xaaskaaga afka u galiso.
2. Ninkaaga Ixtiraamka Ha ka Badinin:
Waxaa kaloo muhim ah in markay lamaanaha wada hadlayaan uu ahaado mid aan cambaareyn ku jirin. Cambaareyntu, qofkii shakhsiyadiisa ayaad toos u weeraraysaa oo waxaad ka cabanaysid ma ka hadlaysid. Marka waxaa haboon in aad dareenkaaga ka hadasho, lagana digtoonaado ereyada sida “Adiga mar walba sidaan baad sameysaa”, Adiga waligaa IWM. Tusaale, buraanburtan waxaa curisay gabar Soomaali ah oo ninkeeda uga cabatay in uu maalintii canaanto, haddana habeenkii Abaayo macaan ku dhahaayo. Ayadoo dareenkeeda ka hadlaysa ayay waxay ku tiri “Calool Nugulaa Caruurtayda Aabahood, Intuu i canaantay buu Caasha-Weris i yidhi”. Ninkeedii markuu maqlay ereyadeeda fahmayna dareenkeeda mar dambe ma canaanan. Ragow Waxaa haboon in aad farax geliso xaaskaaga hadaad rabtid in ay kuu hagar baxdo “Rag naagaa is dhaafshay”.